Dowlada Kenya oo mar kale laga diiday Codsi kale iyo Soomaliya oo Guusha Baddeda u dhowdahay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowlada Kenya oo mar kale laga diiday Codsi kale iyo Soomaliya oo...
Dowlada Kenya oo mar kale laga diiday Codsi kale iyo Soomaliya oo Guusha Baddeda u dhowdahay
Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ICJ ayaa berri galab 3:00PM dhagaysan doonta gunaanadka Dacwadda badda Soomaaliya. Ka dib markii ay diiday maxkamaddu codsigii Kenya ee ahaa inay dib ugu soo laabto dhagaysiga dacwadda.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka XFS Mahdi Maxamed Guuleed ayaa goordhaw xaqiijiyey in maxkamaddu qaadatay go’aankaas.
Dowladda Kenya ayaa maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ka codsatay in loo ogolaado ka qeyb galka dhageysiga maxkamadda oo ay maalmaheedii kala ahaa 18-19 qaadato.
Maxkamadda ayaa diiday Dalabka cusub ee ka yimid Kenya maadaama ay horey u shaacisay iney ka baxday dacwada badda ee Somalia ka gudbisay, waxaana halkaas Somalia uga banaanaatay fursad qaali ah oo Kenya aysan iska difaaci karin.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa shaaca ka qaaday in maalinta beri ah la soo gabo gabeyn doono dhageysiga kiiska dacwadda baddeenna ee ay muranka gelisay Kenya.
“Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ayaa berri galab 03:00pm xilliga Hague dhagaysanaysa gunaanadka Dacwadda Baddeena ee inagala dhaxaysa Kenya” ayuu yiri RW ku xigeenka Somalia oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook
Previous articleHalis Qaran
Next articleCiidamada madaxtooyada oo xalay fuliyey howlgalo qorsheysan
Dacwadii Badda Soomaliya iyo Kenya oo la soo gaba gabeeyey maanta